Russian State University for the Humanities - Funda ngaphandle
Russian State University for the Humanities Yokuxhumana
isifinyezo : RSUH
Wasekelwa : 1908
abafundi (ngu.) : 30000
Ungakhohlwa xoxa Russian State University for the Humanities
Bhalisa at Russian State University for the Humanities
ussian State University for the Humanities zamila eMoscow State Institute for Umlando kanye Archives. usuku lokuzalwa Its olusemthethweni 27 Mashi 1991.
Emzuliswaneni wokuqala sokwemukelwa ku RSUH senzeka ngo 1991. Naphezu baso isencane, RSUH liye laba khona omunye the best phakathi amanyuvesi abahlonishwa kakhulu zaleli zwe, sebezivumisile kwavela njengoba izikhungo zemfundo ehola futhi ucwaningo eRussia. University Wethu waba ngowokuqala kuleli lizwe ukuhlanganisa amagama athi "Russian" futhi "Humanities" egameni layo. Siyaziqhenya futhi ngihloniphekile kuyakufakazela lokhu isihloko, owake ukulwela ukuba kuqhutshekwe lokugcizelela isimo sethu. I enqubekeleni phambili esesiyenzile saziwa kokubili ngaphakathi ezweni kanye aphesheya. Kuyo yonke le minyaka esidlule RSUH bekugcwele the izikhungo sough-ngemva kakhulu phakathi abafundi abalindelekile. Futhi thina azizwe enesibopho esingakanani ukuba zingagcini nje ngokuzwa ukulondoloza kodwa ukuthuthukisa futhi enothisa ifa ngazo singena kweshumi lesithathu umlando wethu.
izimiso ezemfundo University:
I-European system-level ezimbili zemfundo (B.A. - M.A.) kubonakale kwandisa izinhlobo zokuqeqeshwa bese unikeza kungenzeka ukutadisha futhi ukusebenza phesheya.
Ukuhlanganiswa ucwaningo kanye nemfundo ivumela abafundi ukuthuthukisa amakhono okuhlela nokucwaninga futhi uthole isethi ezidingekayo ngamakhono.
Ukusimama futhi interdisciplinarity omelelwa eziyinkimbinkimbi enobunye zemfundo uma kuqhathaniswa uchungechunge izinhlelo ezihlobene non-ezikhethekile.
Practice-ngamakhasimende ndlela amathrekhi ezemfundo sisekelwe phezu inhlanganisela wadala ngokucophelela ayisisekelo ulwazi theory kanye izandla-on amakhono.
Imvelo zemfundo kunikela ekufundeni, futhi kusekelwe Umqondo wokuba nenkululeko yokudala futhi professional self-actualization futhi ezimisweni ukubekezelelana mutual.
Student-ngamakhasimende Imfundo kuvumela ngokushaya singene amakhono ngabanye abafundi. Inyuvesi ine umfundisi uhlelo esebenzayo.
I impilo yokufunda nomqondo eliyibheka ngayo le imfundo njengoba eqhubekayo kanye uninterrupting. RSUH unikeza ukuqeqeshwa ukulungiselela abafundi abalindelekile, Ngokuqhubeka izinhlelo zokufundisa kanye graduate namaculo postgraduate. Lezi zinhlelo ukusebenza kokubili eMoscow ezindaweni.
Isimiso esithi "bezifundisa ngokusebenzisa ubuciko" kuye kwaholela kwakheka ukuqeqeshwa isimo esingavamile - efundisa eminyuziyamu kanye namahholo embukisweni.
Institute for Umlando Ezinqolobaneni
Division ngoba izinto ezigciniwe zomlando Ucwaningo
Division ngoba Amaphepha Ucwaningo
Division for Archives kanye Amaphepha Isitoreji Technology
Division komlando, Political Science and Law
Lesi sikole eliphezulu imibhalo kanye nezincwadi ukuhlinzekwa managment
Institute for Umlando kolimi
Division komlando futhi kolimi
Division ngoba Awezolimi theory kanye osetshenziswayo
Institute for Ezomnotho, Ukuphathwa kanye noMthetho
Division of Ubudlelwano International
Division for Social Psychology futhi Pedagogy
Institute for Information Isayensi Security Technologies
Institute for Studies abaseMpumalanga Classical
Division History of Art
Division ngoba Philosophy
Institute for Studies Okuthuthukile Humanities
Institute for Umlando Russian
Komphakathi Anthropology Ucwaningo Education Center
Russian-American Study Research Center for Biblical Studies kanye Jewish
Russian-American Academic Center for Studies American
Ucwaningo-imfundo Centre for yezengqondo nokufundela Technologies
Russian-Swiss Centre of RSUH
Russian – Swedish weSikhungo Semfundo Nocwaningo
Russian – Turkish Sikhungo futhi Research Center
I Depatment ka Iranian Ucwaningo
Graduate School Yamasiko European
RSUH sokuzilungiselela Centre
Ubuciko Design Center
USihlalo umlando scence
Moscow Public University, eyasungulwa ngo 1908 ngokusebenzisa isinyathelo Alfons L. Shanyavsky, i abavikela ovelele Russian of arts, waba nendima ekhethekile imfundo Russian.
Kuya ku 1918, kwaqala "khulula" isikhungo waseRussia inyuvesi unfettered ukulinganiselwa letihlelekile naletingakahleleki ivulekele wonke umuntu "owomile ngempela ulwazi". It iqalise izimiso okuqhubekayo imfundo okunye ngokuhlanganyela isisekelo zezemfundo ziyatholakala kuwo wonke umuntu.
Ngo 2012, Russian State University for the Humanities igubha 100th esenzeka isakhiwo zako ezisemqoka, okuyintowayevela eMoscow Public University phambi Russian Yenguquko 1917.
Moscow State Institute for Umlando Ezinqolobaneni yasungulwa ngo 1930 ngoba ukuqeqeshwa ingobo yomlando izifundo Ochwepheshe.
Kule minyaka edlule kube waba isikhungo ucwaningo zezemfundo. Emibhidlangweni yawo archival ezindaweni yomlando futhi enjalo mikhakha asizayo njengoba ekutadisheni imithombo eyinhloko, Imivubukulo futhi palaeontology, ke ukulondoloza kunakho Russian isiko ucwaningo.
Ngasekuqaleni kuka-1990 kulesi sikhungo izuzwe ezingeni "inyuvesi", ngokwemvelo asinikeze amandla ukuba abe inhliziyo isakhi RSUH, obasungulelwa 1991.
Eziningana RSUH neminyango zitholakala ngendlu eceleni ezibiyele. Kuyinto ngokoqobo ngaphakathi ngomzuzu-5 ukuhamba ibanga. Ngakho abafundi bethu ungakwazi ukujabulela Medieval Rus izakhiwo kanye kakhulu kwenhliziyo ka eMoscow, yawo ebanzi Tverskaya.
Russian State University for the Humanities ingenye amanyuvesi okuholela eRussia. Ezisekelwe emasikweni ekhulwini-eside, ibuye eselungela phezu onqenqemeni cutting emisha.
Uyafuna xoxa Russian State University for the Humanities ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Russian State University for the Humanities kumephu
Izithombe: Russian State University for the Humanities Facebook ezisemthethweni
Russian State University for ukubuyekezwa Humanities
Joyina ukuxoxa of Russian State University for the Humanities.
Isikolo samabanga aphezulu of Economics Moscow